Kholambiya - ALinks
Ungafudukela njani eColombia usuka eVenezuela?
Julayi 29, 2021 demi Kholambiya, ababaleki, Abantu baseVenezuela, ivisa
Uxinzelelo oluphezulu lokufudukela eVenzuelan luseColombia, ePeru naseChile. Njengoko uyazi ukuba sele kuqhubeka ezopolitiko, amalungelo oluntu, kunye nophuhliso lwezentlalo kwiRiphabliki yaseVolivia yaseVenezuela (emva kweVenezuela) kukhokelele ekumkeni okungaphezulu
Ungasifaka njani isicelo seNgcaciso eColombia? Yazi apha!
Septemba 5, 2020 UKaruna Chandna Kholambiya, ababaleki
IColombia ihlala ithule ngexesha lemfazwe yamakhaya. Apho uninzi lwabantu baseColombia boyika ukubuyela umva. Urhulumente ulwa namaqela. Njenge-FARC kunye ne-Revolutionary Army for Independence (ELN). Ngelixa urhulumente enze iinzame ezibonakalayo zokuphucula
Amaziko ononophelo lwempilo eColombia
Aprili 30, 2020 IShubham Sharma Kholambiya, impilo
Ukhathalelo lwempilo eColombia Iinkonzo zokhathalelo lwempilo eColombia ngumgangatho ogqibeleleyo womgangatho ophezulu, ukuFumaneka ngokulula, kunye nexabiso eliphantsi kakhulu. Iinkonzo zokhathalelo lwempilo eColombia zibekwe kwindawo yama-22 nguMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO). Iinkonzo zokhathalelo lwempilo zaseColombia ziqwalaselwa
Aprili 15, 2020 UKaruna Chandna Kholambiya, ivisa
Inkqubo ye-visa yaseColombia ilula kakhulu ukuyiqonda. Inkqubo yesicelo ikwi-intanethi kwaye i-visa iya kuba ye-elektroniki kubo bonke abahambi. Njengoko yonke inkqubo ngoku yenziwe kwi-intanethi ukuze ukwazi ukuyiphumeza yonke
Isikhokelo sezothutho kubahambi eColombia
Matshi 15, 2020 IShubham Sharma Kholambiya, yibakhona
I-Colombia, ilizwe elikwicala elisemantla eMzantsi Merika. Ezothutho eColombia zintle kakhulu izinto ezilawulwa nguMphathiswa Wezothutho kwaye phantse yonke imithombo yezothutho ikho. Eyona ndlela ikhethwayo yokuhamba ngaphakathi
Inkqubo yeColombia: Isikolo samabanga aphantsi saSimahla
Februwari 28, 2020 UMaitri Jha Kholambiya, isikolo
IColombia lilizwe lesihlanu ngobukhulu kwiLatin America ephantse yaliphinda kabini ubungakanani beTexas kwaye inabemi abangaphezu kwezigidi ezingama-46. Ukuba ucwangcisa ukuya eColombia kunokuba kufuneka ujonge inkqubo yemfundo
Amagqabantshintshi eeBhanki zaseColombia.
Novemba 16, 2019 UAntika Kumari Kholambiya, imali
Iibhanki zaseColombia Bank yeRiphabhlikhi (iBanco de la Republica) yibhanki esembindini yaseColombia. Isebenza njengebhanki yeebhanki eColombia. Eyona misebenzi iphambili yebhanki ephambili yelizwe yile: Ukusebenza njengebhanki yaseburhulumenteni Ukulawula
Iindawo zokuthenga ezizodwa ezikhethekileyo zokuhlola eBogota, eColombia.
Novemba 15, 2019 UAntika Kumari Kholambiya, izinto zokwenza
Ngubani ongakuthandiyo ukuthenga kwaye ukuba uya eColombia kunokuba kufuneka undwendwele ezi venkile ezinkulu eColombia. Nalu uluhlu lweeMall eziphambili eColombia Centro Commerce Andino (Ivenkile yokuthenga) Hacienda Santa Barbara (Shopping Mall) El Retiro (Shopping Mall) Atlantis